एमसीसी बारे प्रचण्डले फेरे बोली: भर्खरे गरे यस्तो उद्घोष: माओवादी कै नेताहरु आश्चर्य चकित् ! (भिडियो हेर्नुहोस्) -
Home News एमसीसी बारे प्रचण्डले फेरे बोली: भर्खरे गरे यस्तो उद्घोष: माओवादी कै नेताहरु...
एमसीसी बारे प्रचण्डले फेरे बोली: भर्खरे गरे यस्तो उद्घोष: माओवादी कै नेताहरु आश्चर्य चकित् ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
एमसीसी बारे प्रचण्डले फेरे बोली: भर्खरे गरे यस्तो उद्घोष: माओवादी कै नेताहरु आश्चर्य चकित् ! (भिडियो हेर्नुहोस्) । एमसीसी बारे प्रचण्डले फेरे बोली: भर्खरे गरे यस्तो उद्घोष: माओवादी कै नेताहरु आश्चर्य चकित् ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
दोहा : कतारमा फिफा विश्वकप २०२२ सुरु हुन अब ठिक एक वर्ष बाँकी रहेको छ । अबको एक वर्षमा आजकै दिन नोभेम्बर २१ देखि कतारमा फिफा विश्वकपको २२ औं संस्करण आयोजना हुनेछ । प्रतियोगिता नोभेम्ब २१ देखि डिसेम्बर १८ सम्म चल्नेछ । डिसेम्बर १८ मा कतारको राष्ट्रिय दिनको अवसर पारेर प्रतियोगिताको समापन हुनेछ ।
कतारले आयोजना गर्ने विश्वकप मध्यपुर्व र अरब राष्ट्रमा पहिलोपटक र एसियामा दोस्रो पटक हुनेछ । अरब संस्कृति संगै एकै दिन दुई खेल हेर्न मिल्ने भएका कारण पनि यो विश्वकप दर्शकहरुको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
विश्वकप ६० हजार दर्शक क्षमता भएको अल बायत रंगशालाबाट सुरु हुनेछ र समापन लुसेल रंगशालामा हुनेछ । हालसम्म आठ वटा रंगशालाको तयार भैसकेको छ । लुसेल रंगशाला अर्को वर्षको फेब्रुअरीमा उद्घाटन गर्ने तय भएको छ । हिजो मात्र कतारले सातौं रंगशाला स्टेडियम ९७४ तयार भएको घोषणा गरेको थियो ।
Previous articleकतारमा बिश्वकप फुटबलको स्टेडियम निर्माण गर्दा यतिधेरै नेपालीको मृत्यु
Next articleगायिकाले प्रशंसकलाई स्टेजमा बोलाएर मुखमा पिसाब गरिदिएपछि बिश्वभर हंगामा (भिडियोसहित)